Ganacsiga Broadleaf: Maalgeli Customization, Ma shatiyeyn
Sabtida, Juun 27, 2015 Axad, Juun 28, 2015 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 3 daqiiqo Meel ka mid ah tikniyoolajiyada suuq-geynta, waxaa jiray koboc balaaran oo ay lajirtay Software-ka Adeeg ahaan iyo awood u lahaanshaha iibsashada wixii aad ugu baahnayd sanduuqa. Waqti ka dib, SaaS waxay ka gudubtay kharashka dhismaha iyo shirkado badan oo SaaS ah ayaa ka baxay markii ay ku guuleysteen dhismaha ka soo horjeedka iibsiga miisaaniyadda. Sannado ka dib, iyo suuqleydu waxay isku helayaan meel kale oo isgoys ah. Xaqiiqdu waxay tahay in dhismaha uu sii wado hoos u dhaca qiimaha. Waxaa jira dhowr sababood oo ah sababta